October 25, 2021 - Channel Lover
ပန်းကိုင်တဲ့လက်ကနေ သေနက်ကိုင်တဲ့လက် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အာဂမိန်းကလေး
October 25, 2021 by Channel Lover
ပန်းကိုင်တဲ့လက်ကနေ သေနက်ကိုင်တဲ့လက် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အာဂမိန်းကလေး PDF တွေဟာ တကယ်တော့ မျိူးဆက်သစ် လူငယ်လေးတွေ ဖွဲစည်းထားကြသည့် ပြည်သူ့တပ်မတော်သာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ အကျိူးဆိုရင် နေရာမရွေး ၊ အချိန်မရွေး ထမ်းဆောင်ကြဖို့ အသင့် ရှိနေသူလေးတွေပါ။ အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံလို့ အရာရာကို စွန့်လွတ်ပြီး ပြည်သူ့တွေကို ကာကွယ်ဖို့ သွားခဲ့ကြသူတိူ့ပါ။ တစ်ချိူ့ဆိူ မိဘအိမ် ၊ ချစ်သူ အစရှိတဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြတ်ပြီး လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေကလည်း အမွေဖြတ်စွန့်လွတ်ကြတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ရောက် သူတို့ဟာ နောက်ဆုတ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာကို ရင်ဆိုင်သွားကြမည့် ဇွဲမလျော့တဲ့ သူတို့ပါ။ ခုအချိန်မှာ သူတို့ကို ပြန်လုပ်ပေးနိူင်တာဆိုရင် သူတို့တွေစားဖို့ သူတို့တွေတောထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနေနိူင်အောင် လှူပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်…။ မြန်မာပြည်ကြီး အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေ … Read more
တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွင် CRP အလိုမရှိ၊ NUC အလိုမရှိ၊ CPS အလိုမရှိဟု လွဲမှားစွာကြွေးကြော်( ရုပ်/သံ)
တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွင် CRP အလိုမရှိ၊ NUC အလိုမရှိ၊ CPS အလိုမရှိဟု လွဲမှားစွာကြွေးကြော်( ရုပ်/သံ) ဧရာဝတီတိုင်းမ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့တွင် အောက်တိုလာလ ၂၅ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေက CRP အလိုမရှိ၊ NUC အလိုမရှိ၊ CPS အလိုမရှိဟု လွဲမှားစွာကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရုပ်သံ – လူမှုကွန်ရက် ရုပ်သံကြာချိန် – ၃၃ စက္ကန့် #လားရှိုး #တပ်ထောက်ခံပွဲ #Ayeyarwaddy_Times unicode တပျမတျောထောကျခံပှဲတှငျ CRP အလိုမရှိ၊ NUC အလိုမရှိ၊ CPS အလိုမရှိဟု လှဲမှားစှာကွှေးကွျော( ရုပျ/သံ) ဧရာဝတီတိုငျးမျ အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျ ရှမျးပွညျနယျ … Read more
အရေးကြီးသတင်းများဖုံးသွား​စေတာမို့ မရောင်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကိုဒ.ဲ့​ပြောလာခဲ့ပြန်​​သော သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း
အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသွားလို့ မရောင်ရာ ဆီလူးနေကြတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ကတော့နွေဦး ​တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့ပြီး မတရားမှူကို လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့တြာ ဖစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့ရပြီး သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့ လွတ်မြောက် နယ်မြေမှာမိသားစုနဲ့အတူေ ရာက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မင်းမော်ကွန်းက ရန်ကုန်က အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသွားလို့ မရောက်ရာဆီလူးနေ ကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြော လာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းက “မန်ယူရှုံးတာ စောက်အရေးကြီးလို့လားဟ” ဆိုပြီးပေါ.က်ကွဲ လာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီး ဖတ်​ရှု့​ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင် လက်အောက်က​နေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း​ပေးလိုက်ရပါတယ်။ credit unicode အရေးကွီးသတငျးတှေ ဖုံးသှားလို့ မရောငျရာ … Read more
မင်းအောင်လှိုင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးတစ်ဦး အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ခွင့်မရလျှင် မတက်ဟု စစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန်
မင်းအောင်လှိုင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးတစ်ဦး အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ခွင့်မရလျှင် မတက်ဟု အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ် စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီး တစ်ဦးဦး အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ခွင့်မရလျှင် တက်ရောက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီက ယနေ့ည သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် (၃၈) ကြိမ်မြောက်နှင့် (၃၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ နှင့် ဆက်စပ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ နိုင်ငံအကြီးအကဲ(မင်းအောင်လှိုင်) သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအကြီးအကဲ( မင်းအောင်လှိုင်) ကို ကိုယ်စားပြုမည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ် က ပါဝင်တက်ရောက် နိုင်ရေးကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ … Read more
အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထီးဖြူဆောင်းပြီး ထမိန်ကို စောက်ထိုးဝတ်ကာပုလိပ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ပုလိပ် အနီး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထီးဖြူဆောင်းပြီး ထမိန်ကို စောက်ထိုးဝတ်ကာပုလိပ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားကြောင်း ပြည်သူ တစ်ဦးမှ သတင်းပေးလာပါတယ်။ ဗားမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ ကဝေသာရကျမ်းထဲက ယတြာမျိုးပဲ။ ဒါမျိုးကို မက်မက်စက်စက်ယုံတတ်တာ ဟိုတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အာဆမ်မှာ ထိုင်ခုံရဖို့ဖြစ်မယ်။ (ပ၊လ)နဲ့ (မ၊အ၊လ) ရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံး နံတူနေတယ်။ သူ့ကို ထီးဖြူလာဆက်သတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲဒီ ထမီဇောက်ထိုးဝတ်တဲ့ အမျိုး သမီးဟာ အင်္ဂါသမီးဖြစ်ဖို့များတယ်။ credit unicode စဉျ့ကိုငျမွို့နယျ ပုလိပျ အနီး အမြိုးသမီး တဈဦး ထီးဖွူဆောငျးပွီး ထမိနျကို စောကျထိုးဝတျကာပုလိပျဘကျသို့ လမျးလြှောကျသှားကွောငျး ပွညျသူ တဈဦးမှ သတငျးပေးလာပါတယျ။ ဗားမဲ့ဆရာတျောရဲ့ ကဝသောရကမျြးထဲက ယတွာမြိုးပဲ။ ဒါမြိုးကို မကျမကျစကျစကျယုံတတျတာ ဟိုတဈယောကျပဲ ရှိတယျ။ အာဆမျမှာ … Read more
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ၁၂ : ၀၀နာရီခန့်က ဆိုင်ကယ်လုဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်း
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ၁၂ : ၀၀နာရီခန့်က ဆိုင်ကယ်လုဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်း အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ၁၂ : ၀၀နာရီခန့်က ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ဖော့ကန်ဈေးအနောက်ဘက် အမက (၅၂ )နားကို ဆိုင်ကယ်ငှားလာပြီး ဆိုင်ကယ်လုဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းပါ ဆိုင်ကယ်က Remote နဲ့ ပိတ်လို့ရလို့ ဆိုင်ကယ်တော့ ပါမသွားပါဘူး ။ လုတဲ့သူ ၂ ယောက်စလုံးမှာ လက်နက်ပါပါတယ် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား ဘာဒဏ်ရာမှ ကြီးကြီးမားမားမရခဲ့တာ တော်သေးတယ်လို့ဆိုရပါမယ် ။ မူရင်း #Credit #နေရာအနှံအပြားမှာလုယက်မှုတွေကနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်ပျက်နေကြတာ #သတိထားကြပါဗျာ #SiThuMaung unicode အောကျတိုဘာလ ၂၄ ရကျနေ့ ၁၂ : ဝဝနာရီခနျ့က ဆိုငျကယျလုဖို့ကွိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV … Read more
ဂေါက်သီးတစ်လုံးကြောင့် ကာမဆန္ဒတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ‘ချောမော လှပ’တဲ့ သူ့ဇနီးကို ဂေါက်ရိုက် သင်ပေးရင်း ‘ဂေါက်သီးဟာ တဖက်ခြံက အိမ်ပြူတင်းပေါက်မှန်ကိုထိပြီး မှန်ကွဲသွားပါလေရော!……။ လင်မယားနှစ်ယောက်လည်း အဲ့ဒီ အိမ်ရှင်ကို တောင်းပန်ဖို့ ပျာပျာသလဲနဲ့ သွားကြရတာပေါ့။ တဖက်အိမ်ရောက်တော့…အိမ်ရှင်လို့ထင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်က ‘ရှေးဟောင်းမီးခွက်လေးတစ်ခုကိုကိုင်ပြီး အဆင်သင့်စောင့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လည်း’ မိမိတို့ကြောင့် အိမ်ပြူတင်းပေါက်မှန် ကွဲသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါကြောင်း မှန်အသစ် ပြန်လဲပေးပါမယ့်အကြောင်း ပြောကြတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ အိမ်ရှင်လူကြီးက ဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုတော့!… “တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူးဗျာ ကျုပ် ခင်ဗျားတို့ကိုတောင် ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်နေမိတာပါ။ အမှန်က ကျုပ်ဟာ… မီးခွက်စောင့်နတ်ပါ! ဒီအိမ်ကမီးခွက်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ပိတ်မိနေတာ။ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ပြူတင်းမှန်ကွဲသွားလို့ မီးခွက်အောက်ကျသွားတော့မှ… ကျုပ် ခုလို ‘လွတ်ကျွတ်’သွားရတာပါ!” တဲ့။ “ဒါကြောင့်လည်း ခင်ဗျားတို့ကိုကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ စောင့်နေတာ”နှစ်ယောက်စလုံး လိုရာဆု’ကိုတောင်းကြပါ!” … Read more
အမေရိကန်နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက Burmese Chase အမည်ဖြင့် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့(ရုပ်/သံ)
အမေရိကန်နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက Burmese Chase အမည်ဖြင့် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့(ရုပ်/သံ) အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက နှစ်စဉ် စစ်ရေးပေါင်းစည်းလေ့ကျင်မှု ပြုလုပ်လေ့ရှိရာ ယခုနှစ် စစ်ရေးပေါင်းစည်းလေ့ကျင်မှုကို Burmese Chase အမည်ဖြင့် စက်တင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး US မရိန်းတပ်ဖွဲ့မှ မရိန်းတပ်သားများသည် နေတိုးမဟာမိတ်တပ်သားများနှင့်အတူ မြေပြင်၊ ဝေဟင်နှင့် ရေတပ်တိုက်ပွဲအတွက် ဘက်စုံပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ စစ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင် Burmese Chase စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့်အတူ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ ဆွီဒင်နှင့်နော်ဝေ အပါအဝင် နေတိုး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့မှ Capt. George Gibsonက ” Burmese Chase စစ်ရေးလေ့ကျင်မှုက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက် ပူးပေါင်း … Read more
ဟုမ္မလင်းမြို့က CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ကြွေလွင့်ရပြန်ပြီ….
ဟုမ္မလင်းမြို့က CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ကြွေလွင့်ရပြန်ပြီ…. စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက စစ်ကောင်စီတပ်တွေ က CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟုမ္မလင်းမြို့ နောင်ပကျစ်ရပ်ကွက် လျှစ်စစ်ကုန်းက တိမ်းရှောင်နေတဲ့ သပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ နေအိမ်ကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေ မနေ့ည ၇ နာရီခွဲလောက် လာရောက်ရှာဖွေပြီး မရီးဖြစ်သူကို ပစ်သတ်သွားတယ်လို့ ကာယကံရှင်က ပြောပါတယ်။ ကိုကျော်ဝင်းစိန်က “ဟုမ္မလင်းမြို့ရဲ့ ဒလန်အကြီးစား ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် မောင်မော့စ်ကို အမည်မသိအဖွဲ့က သတ်တယ်ဆိုလားမသိဘူး၊ မောင်မော့စ်ဆိုတဲ့ကောင်ကို ကျနော်အပြင်မှာ ကောင်းကောင်းတောင် မမြင်ဖူးသလို အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စဟာလည်း ကျနော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ပတ်သက်ခဲ့ရင်တောင် သတ်မယ့်သတ် ကျနော့်ကို သတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား၊ အခု မဆိုင်တဲ့ ကျနော့်မရီးကို သေနတ်နဲ့ ၃ … Read more
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်(၃)ဦး သေဆုံးပြီး PSTF တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယနေ့တိုက်ပွဲ
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်(၃)ဦး သေဆုံးပြီး PSTF တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယနေ့တိုက်ပွဲ ကန်ကြီးထောင့်၊ ကညင်ငူရွာအနီး စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးအား PSTF မှ ဗုံးပစ်သွင်းဖောက်ခွဲ၊ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးသေဆုံး ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ PSTF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး ကျဆုံး ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ကညင်ငူရွာ ကားမှတ်တိုင်အနီးတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကားတစီး ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် ညနေ ၆ နာရီဝန်းကျင်၌ ပုသိမ်ခရိုင် မြို့ပြပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့-PSTF က ဗုံးပစ်သွင်း ဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး သေဆုံးကာ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရကာ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရသဖြင့် PSTF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကျဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “ဗုံးကွဲပြီးတော့ စစ်ကားက … Read more